गित संगीत Archives - Page2of 8 - Saptakoshionline
पछील्लो समय धेरै चर्चा मा रहेको र आसा गरिएको चलचित्र 'साइनो' गीत संगीत सँगै ट्रेलर पनि अत्यधिक मन पराइएको छ । नेपाल कै प्रथम नायिका भुवन चन्द को निर्माण तथा प्रस्तुती रहेको फिल्म 'साईनो' त्रिकोणात्मक प्रेम कथा म आधारित फिल्म हो । फिल्म को ट्रेलर आउन भन्दा अघी नै यस् फिल्म को २ गीत 'मायालु लाई जात्रै मा भेटीयो..... ,'कुन माया को साईनो .... ' बोल को गीत लाई दर्शक स्रोता ले अत्य...
एक दृश्यमा कबीर सिंह (शाहिद कपूर) भन्छन्, ‘जिन्दगीमा तीन घटना नै राम्रो हुन्छ-जन्मनु, प्रेममा पर्नु र मर्नु ।’ चलचित्र एक यस्तो दृश्यसँग सुरु हुन्छ, जहाँ एक पुरुष र महिला ओछ्यानमा सुतिरहेका हुन्छन् । पछाडिबाट समुन्द्रको तिब्र छालको आवाज आउँछ । त्यही छालको आवाजसँगै हामी कबीर सिंहको तुफानी जिन्दगीमा प्रवेश गर्छौ । उनी एक मेडिकल सर्जन हुन र फुटबल च्याम्पियन पनि । उनी कलेजका टपर हुन् । पढाईमा मे...
ईटहरी/ पछिल्लो समयमा नेपालमा कमेडी अन्य देशमा मात्र नभई नेपालमा पनि व्यापक मन पराइएको पाइन्छ । अझ युट्युबमा आउने बिभिन्न कमेडिको शृङ्खलाले त झनै यसपट्टि नेपालिहरुको लगाबलाई तानेको छ । यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रुपमा विकसित हुँदै छ । ‘स्ट्यान्डप कमेडी’ । हेर्नुस् प्रदेश १ को ईटहरीबाट राउडिजमले सुरु गरेको स्ट्यान्डप कमेडीको पछिल्लो एपिसोड । अहिले कमेडिको यो शैली काठमाडौमा मात्र सिमित नभएर प्र...
“आप्पा”को स्याड भर्सन गीत रिलिज , फिल्म असार १३ मा
असार १३ जुन २८ को लागि रिलिज मिती तय गरिएको नेपाली कथानक चलचित्र "आप्पा" को अर्को स्याड भर्सन 'सावने झरी,,,,; बोल को गीत रिलिज भएको छ । आज International Father Day परेको ले पनि आज रिलिज गरिएको फिल्म कि एक कलाकार तथा मिडिया कोर्डिनेटर रुची डेक्स्यङ ले जानकारी दिनु भयो । सो गीत MOUNTAIN STORIES ENTERTAINMENT को युटुब च्यानेल मार्फत औपचारिक रिलिज गरिएको हो । बिज्ञान बराइली को आवाज...
मनिष लाई लिड रोल भन्दै प्रचार , प्रदिप लाई छाया मा पार्ने के यो षड्यन्त्र हो ?
अहिले नेपाली चलचित्र बजार मा मात्रा हैन हरेकको सामाजिक सन्जाल मा पनि एउटा निर्माणधिन चलचित्र को खुबै चर्चा छ । चलचित्र को औपचारिक रुपमा निर्माण घोषणा गर्न बाँकी भए पनि यस चलचित्र सम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा हरु बाहिरी सकेकोछ । रिलिज मिती घोषणा सँगै चलचित्रको निर्माण बारे जानकारी दिदै आएको सबैलाई सर्वबिदित नै छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही नयाँ र फरक गरु भन्ने जोश का साथ अगाडि बढेको एक यु...
इटहरी/ सुनसरीको इटहरीमा ’मिस व्यूटी आईकन २०१९’को आयोजना हुने भएको छ । एम के फोटोग्राफीको आयोजनामा हुने आइकनको आगामी असार ७ गते र १४ गते अडिसन हुने आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आयोजकले जनाएको छ । खास गरी १५ देखी २३ वर्ष उमेर समूहका युवतीहरू भित्र रहेका क्षमता र प्रतिभा प्रफुष्टन गर्ने उदेशयले कार्यक्रकको आयोजना गरिने कार्यक्रम संयोजक वसन्त बस्नेतले जानकारी दिए । प्रदेश नं १ क्षेत्र भित्रका २५ प...
हिपप सांगितिक कार्यक्रम पहिलो पटक इटहरीमा
इटहरी । पछिल्लो समय युवाहरुको आकर्षण बन्दै आएको हिपप संगित पहिलो पटक इटहरीमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय कलाकारहरुको सहभागितामा आयोजना हुने भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कलाकारहरुको प्रस्तुति रहने हिपप सांगितिक कार्यक्रम ओशियन पार्कमा यही जेष्ठ ३० गते आयोजना गरिने पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिइएको हो । हन्टमा २०१८मा टप १०० हिजेन विजेता डिजे लेनेटा समेत आउने ग्लोबल ड्म्सि म्यानेजमेन्टको आयोजन...
धरान: इटहरीका बाल प्रतिभा एवं गायक प्रितम आचार्य सारेगमपा रियालिटी सोको लिटिल च्याम्समा उत्कृष्ट ६ मा पुगेका छन् ।प्रितम अब फाइनल भिडन्तको तयारीमा भएको राजु केसीले जानकारी दिएका छन् । केसीका अनुसार अब प्रितमलाई भोटिङ गर्नु पर्दैन । 'श्रममा आधारित एउटा निम्न मध्यम बर्गिय परिवारका पृतम बिशेषत: उनको परिवार(बुवा आमा)को दृढ इच्छाका कारण त्यहाँसम्म पुगेका हुन,'केसीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,'...
प्रितम आचार्य सारेगमपको सेमिफाइनलमा
इटहर । इटहरीका गायक प्रितम आचार्य भारतीय रियालिटी शो सारेगमपको सेमिफाइनलमा पुगेका छन् । उनले सेमिफाइनलमा पनि जजहरुको मन जितेका छन् । उनको लुट गए ...........बोलको गीत गाएको प्रोमो सार्वजनिक भएको हो . जसमा उनलाई जजहरुले स्टेजमै गएर बोकेको देखाइएको छ ।त्यती मात्र होइन जज बसेका कलाकार आनन्द राज आनन्दले उनको प्रस्तुती आफ्नो लागी यादगार प्रस्तुती भनेका छन् । अर्का जजले भने यहाँ गीत होइन जादु भइरहेजस...